Horumarka BIM - Soo koobida Shirka Annual - Geofumadas
Horumarka BIM - Soo koobidda Shirarka Sanadlaha ah
Oktoobar, 2017 Engineering, tabo cusub, Microstation-Bentley, topografia
Horumarka habeynta habka dhismaha macluumaadka dhismaha (BIM) wuxuu ahaa mawduuca ku-meel-gaadhka ah Shirka Wadajirka ah ee Infrastructure, oo lagu qabtay Oktoobar magaalada Singapore. Inkasta oo xisaabtaydii Twitter-ka ay si caqligal ah u afduubtay hirgelinta # xII2017, hashtag #
Waqtigaan waa inaan ka safri lahaa Nicaragua, waddankaas oo aan go'aansaday inaan ku noolaado sanadaha soo socda. Wax ka yar saacadaha 24 ee hawada; Daraasad ay sameeyeen Managua, San Salvador, Los Angeles, Taipei, Singapore, ayaa ku daray, isbedelka jadwalka ee ka soo horjeeda wareegga dhulka, wuxuu qeexayaa in uu baxo Jimcaha oo uu yimaado Axadda duhurkii. Sidaas darteed waxaan heystey waqti badan oo aan seexdo, taasina waa waxa ugu fiican ee duulimaad ah oo ah meelaha kaliya ee ku yaala filimada iyo qalabka internetka ugu yar ee qaybta China Airlines.
Singapore ayaa la doortay wanaagsan shirka lagu marti ugu Sands Marina ah. Dalku waa tusaale lagu naalloon karo haddii aad u tagto isagoo qasdigiisu yahay la weydiinaya, sarrifka oo baro sida quruun dadka kaliya 6 million noqon kartaa sidaas barwaaqo ah ka dib markii ay xornimada ka konton konton goor dambe. Qaado dhowr saacadood inuu la qabsado ay version 'Singlish', hawlgalka nidaamka gaadiidka, baabuur la isteerinka oo Midigta iyo dareen keena sida loo laga halleeyo lillaahinimada iyo guryaha xawaalad diiwaanka samayn wax ay cajiib ah carra sahaminta cadastiga ee saddexda cabbir.
Socodka iyada oo jidadka iga dhigay nooleeyaan mashaariicda kaliya arkay oo lagu soo bandhigay shir kale, sida DNA-dhismeedka buundada-NRC, design ee dhismaha ee Towers Marina ama aragti ah substantiation deegaanka xuduudda magaalooyinka.
Waxaan seegay maxaa yeelay, asxaabta more macno Hispanic, waayo, wakhtigii this ayaa lagama maarmaan ah in mudnaanta warbaahinta hoos macnaha guud ee mashaariicda loo soo gudbiyey, oo aan ka ahayn in, sida xaqiiqada ah, ka dhigi ajandaha safarka noocan oo kale ah ma aha had iyo helitaanka caymiska hab ahaayeen martida Waxaa jira warbaahino badan oo ka soo jeeda Bariga, ka dib markii 6 sanadihii shirarka ee u dhexeeyay Netherlands iyo Boqortooyada Ingiriiska in mudnaanta la siiyay. Xitaa markaa waxaanu wadnay guud ahaan saxafiyiinta 130, laga bilaabo wadamada 28, laga bilaabo luqadaha kala duwan ee 10.
Tani waxaan heystaa waxyaabo badan oo aan ku sheego, laakiin ujeedooyinka kooban, kuwan waa wararkii ugu fiicnaa dareenkayga.
Isbahaysiga Pavilion waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay. Tani waa habka heer sare ah ee afar tiknoolaji oo waaweyni u horseeday mid rasmi ah, mid kasta oo ka mid ah doorkeeda, oo ah qaab ficil ah oo ku salaysan dhammaystirnaanta;
Topcon. Sida saaxiibtinimo weyn u leh xiriirka la leh baaxadda. Waxay soo bandhigay aragtidooda iyo ka dhigay bannaanbaxyo oo xiiso leh applicability in muuqaalka guud ee dhulka, iyadoo qalabka ay weheliso qalabka dhulka dhaqaaqaan, aad ha u jeexan iyo qabanaysa in mar dambe ma u baahan tahay kormeerayaal xagga iyo Bouncers gelinayn tiirarka, guud ahaan meelaha ama xisaabinta mugga. hab ah in la sameeyo oo la Topcon mudan tahay aqoonsiga ay horumar saddexdii sano ee la soo dhaafay, gaar ahaan haddii waxaannu xusuusan nahay in isku day ugu horeysay la Trimble, Yaase u soo leexan casilay markii ay ahayd in aynan ay ruuxa gumeystaha ahaa.
Siemens. Aragtidayada ah ee lagu kicinayo digitifinta shayada dhabta ah ee dunida waxay na siisaa internetka waxyaabo (IoT) aad u dhow. Waxay na tusisay jawi ka mid ah waxa aan ka rajeyneyno magaalooyinka caqli leh, iyaga oo leh maskaxda iyo maanka maskaxda; aqoonta isku xiran ee ka jirta batroolka xakamaynta kontoroolka ilaa saldhigga awoodda korantada ee magaalada oo dhan.
Bureau Veritas. Inkastoo aan la ogeyn macnaha guud ee reer galbeedka, Veritas waa shirkad diirada saareysa maareynta macluumaadka la isku daro. Waxay leedahay codsiyo qaabeynta waxyaallaha nolosha dhabta ah, laga bilaabo geedi socodka hawlgalka.
Microsoft. Ka dib markii uu isku dayo si joogto ah inuu sii joogo tartanka shirkadaha cusub, Microsoft ayaa gool wanaagsan ay network Azure, taas oo aan waxba ka yar 90% oo ka mid ah loo doortay in liiska shirkadaha Fortune 500 u adeegaan. Microsoft, liddi ku ah waxa aan ku kaftamay in 2010, in xaaladdaasi door ah isagoo channel iyada oo loo marayo taas oo xogta socodka, halkaas oo ka dib markii duugaas ee guulaha ay (Microsoft, Windows. Server SQL) oo isku dayo sidii 2.0 ganacsiga, qabaa balaariso boqolaal codsiyada web aad leedahay, laakiin in ku dhow qofna ma oga.
Bentley Systems. Dabcan, horumariyaha ah ee isbahaysiga tani waa Bentley, gees ah in dareenka adkaysiga isbedelka la kulmay by shirkadaha Iskujira, ayaa noo yaabay. Waxa uu ahaa wax aan macquul aheyn in ay ka fogaadaan aqbalo ee sano ee lasoo dhaafay, la siiyey in aasaasayaasha shirkadda sarreeya; Si kastaba ha ahaatee, sida aan u sheegay, waan la yaabay. Bhupinder ayaa soo bandhigay koox wejiyadooduna dhalinyarada iyo awoodda ay u leeyihiin si ay u muujiyaan cusub ee daalin kaliya ay i xasuusineysaa xoogga Greg, kuwaas oo u muuqataa in ay u nooleynaya ay note u Waxyoon, marna daqiiqado muhiim ah oo daacad ah sawir qaadida leh ka qaybgalayaasha lumin, kuwaas oo macno ahaan ku weydiiyo weedho aysan waligoodna ilaawi doono, maxaa yeelay waxa ay u muuqataa in ay muujiyaan xasuusta weyn iyo damqasho dabiici ah.
Wadahadalka tooska ah ee Bhupinder iyo Keith ay sameeyeen, oo ku saabsan diyaarinta isbeddelka, ayaa ahaa mid xirfad leh. Ka baxsan shirkadda duugoobaynin, waxay ku guulaysteen in ay kordhin dhaxalgal ah in aan rajeynayaa in la qaadi doonaa farcankoodii cusub oo aan laga badinin oo ay ka qiimo shakhsi by qaybgalka xaqiiqda galay saamiyada shirkadaha kale.
soo bandhigaa saaraya ee tarabuunka Alliance Pavilion ayaa abaabulay halkaas waxaa Microsoft, Topcon, Veritas, Bentley Institute of tacliinta sare iyo Xtation IX lahaa qubbad runtii xiiso leh dib u muuqataa. Kuwaasu waxay ahaayeen furan mar walba, inkastoo ay saacada gaar ah oo banaanbax oo aan helay gaar ahaan gacan ka badan qayb ka mid ah koboca. Machadka Bentley The jirey muddo dheer ka hor, laakiin sannadihii la soo dhaafay ayaa soo galay oo diiradda la saarayo ku takhasusay BIM Academy, taas oo haddii ay taasi ayaa waxaa lagu muujiyey on saddex furimood, kuwaas oo in kastoo ay isku xiran, in my opinion la sharxo khadadka shaqo u dhexeeya Bentley iyo Alliance Pavilion:
Bentley Building Academy. Tani waa khadka ugu wayn, taas oo ah isku xidhka dadaalka Topcon iyo Bentley.
Academy Aqoonta Aqoonta. Tani, fekerkaygu, waxay noqon doontaa khadka isdhexgalka ee Bentley iyo Veritas.
Akadamiyadda Horumarka BIM Tani waa isdhexgalka u dhexeeya SIEMENS iyo Bentley.
Waqtiga ayaa sheegi doona haddii fikradayda ay sax tahay.
I-model 2.0 waxay kuxiran tahay daruuraha. Bentley wuxuu soo bandhigay qaabkiisii ​​I-model ee shirkii Charlotte, halkaas oo waxa uu rabey wuxuu ahaa inuu helo wejiga DGN faylka adoo hoos ugu dhigaya heerka udhaxeeya dadka isticmaala caadiga ah inay akhrin karaan. qiiqa ayaa cajiib ah laga bilaabo, la siiyey in this ayaa jidka la xirrira files DGN on files fudud habaysan qanjidhada XML in ay ilaaliyaan oo dhan nolosha mashruuca ka Qaabaynta in hawlgalka. Dabcan, tani ayaa keentay in ay door tababare CAD Microstation heer hoose ah, in ay wax xakamaysada ah, ProjectWise ayaa ka shaqeeya in la xakameeyo hawlgalka iyo AssetWise, wareegga nolosha. CONNECT ayaa isku xoojisay, iyadoo la adeegsanayo codsiyada qaababka hybrid u dhexeeya desktop iyo daruur.
I-model 2.0, halkii lagu kaydin lahaa xogta faylasha, wuxuu diiradda saari doonaa kaydinta daruuraha, iyada oo silsiladaha xogta ay la mid yihiin BlockChain. Xigga I-model 1.0 horay ayaa diiradda loo saaray, laakiin 2009 oo ka fakari lahaa in laga hadlo dariiqa mudnaanta leh; Waxay u muuqataa in ay tahay hab qiime leh oo aan ku sii joogi karno baashaalka Bentley Systems, oo Keith uu soo bandhigay aragti wax ku ool ah. Tani waxay ka imanaysaa I-model Hub, oo horey loogu sii mariyey heerka saddexaad ee BIM, halkaas oo xogta wadaagga ah ee deegaan deegaaneed.
Xaqiiqada dhabta ah, ugu dhow abid. Waxay ahayd mid ka mid ah waxa lagu soo bandhigay shirweynaha, hal keligoodna waxay u egtahay mid leh cod dheer; Xaqiiqda Capt. Bentley ayaa dalbatay arjigan laba sano ka hor shirkad Faransiis ah, hadda waxaa loo soo bandhigay shey la isku dhafan yahay kaas oo sameeynaya sawirrada sawir-qaadashada iyo qaabaynta ee Descartes marnaba samayn. Waxay xitaa na siiyeen caqabadda ah in aan abuurno noocyo gaar ah; in ka badan ka qayb galayaasha 100 gaaray dhamaadkii maalintii labaad, iyadoo codsi ah in in tallaabo kaliya labo rabaa inay qaataan tallaalada isku xiga la xagal aan ka badnayn degrees 15, iyo button in ay curiyaan model ah; adeegga Cloud waa masuul ah inteeda kale ka dibna ay awoodaan si ay u arkaan, isku shaandheyn, isku shaandheyn, qiyaaseed qiyaasta, sida model saddex geesood ah, ka sawiro fudud!
Waa wax kasta oo dadka kale ma samaynayno, inkasta oo si gaar ah in maamulka hybrid of images-xalinta sare ku lifaaqan model ah oo faahfaahsan oo aan u saameeyeen mugga xogta, in my opinion waa ugu fiican ee aan arkay.
Sababtoo ah Bentley waxay xaqiijineysaa sababta ay u arkaan GIS inay tahay arrin muhiim ah. Waxay xoogga saareen mashruuca Geo-engineering, waxay u aadaan u-qalmitaanka IFC, taas oo ah, inkasta oo ay ka fogtahay, waa waddo si wanaagsan loo raad raacay oo dhammaan shirkadaha doonaya inay ku noolaadaan ayaa la dhisi doonaa.
Mashaariicda kama dambaysta ah.
Iyada oo qayb ka ah dhacdada, Abaalmarinta Lagu Sameeyay waxaa loo soo gudbiyey qaybaha mashruuca 17, halkaasoo 51 ay ku guuleysteen magacaabista 409. Waxaan awood u lahaa in aan si faahfaahsan u arko qaar badan oo ka mid ah finalka, kuwaas oo carruurta mashruuca photogrammetry ay ii yimaadaan si ay u bedelaan nidaamka tareenka, iyadoo la adeegsanayo xogta la helay daroogooyinka; Halkaas ayaan la kulmay waddanka Nicaragua iyo reer Meksiko kuwasoo, qaababkooda, laga soo bilaabo fog ay muujiyeen kariibiyaan Caribbean. Sidoo kale mashruuc reer Brazil ah oo dib-u-habeyn ku sameeynaya nidaam biyo ah oo ku yaal aag dabiici ah, waxaan jeclahay mashruucii aadka u badanaa in aan ku dhawaaday markii ay ku guuleysteen booska koowaad. Kuwa kale waxaan ku hadli doonaa maqaal gaar ah.
Maxay tahay isticmaalka inuu tago shir aad u fog?
Waxay ahaayeen shan maalmood oo ka mid ah barashada wax badan, taas oo ay ka faa'iideysatay in ay i weydiistaan ​​inaan turjumo aniga ii gaaro; tashiga dhaqanka in ay hoos-heerka sigaar cabbin foomamka dilaaga ah, sida aynu nidhaahno in our macnaha Hispanic waxyoon heer-sare ah. weli waxaan hayaa, in muddo gaaban, soo noqon dhaqanka hal-abuurnimo waxan oo dhan, taas oo kaliya ayaa sheegay in meesha ay ku dul wax dalalka in ay leeyihiin hormuudkii farsamada, iyo iyaga dalka our macnaha kala duwan kuwaas oo mararka qaarkood ka maqan xaalado badan oo meesha mudnaanta siyaabo badan tahay ee aasaasiga ah iyo, halkaas oo si gaar ah in ka badan technology cusub, waxa loo baahan yahay waa in kuwa mashaariicda keentay codsan habka xilgudashada ugu habboon ee qorshaynta, anshaxa hoose diiradda on geedi socodka iyo garasho qaab shaqsinimada ujeedooyinka wanaagsan oo ka mid ah qorshayaasha dowladda iyo sharciga.
Post Previous«Previous Doorashada Bixiye ee Magangalyada - Khibradda Shakhsiga
Post Next Shir-sannadeedka Saddexaad ee Is-bahaysiga Cadawga Maraykanka iyo Nidaamka Kaydinta DhulkaNext »